Betfair España | Apuestas deportivas online Betfair, မိုဘိုင်း App, Bono | ချစ်သူ | သင်လောင်းကစား
Betfair ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် 2000 ထိုအချိန်မှစ။ အားကစားပဲရစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, နိုင်ငံအများစု၌. ဒီကနေ့ပဲရစ်မှာအကြီးဆုံးစတော့အိတ်ချိန်းဖြစ်သည်.
၎င်း၏ဖန်တီးမှုကတည်းက, လန်ဒန်အခြေစိုက်နှင့်ဗြိတိသျှမြို့တော်မှတ်ပုံတင်. သို့သော်, ဖေဖော်ဝါရီလမှာ 2016 ဆန်အတွက်, အရာ join ဖို့ Dublin အခြေစိုက်သည်.
စပိန်မှာ, တရားဝင် Betfair အမဲလိုင်စင်၏မှန်ကန်သောစီမံခန့်ခွဲမှု.
မင်္ဂလာပါ – ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အသိပေးစာ
Betfair သည်ပါရီမြို့ရှိဗြိတိသျှတို့၏အိမ်ဖြစ်သည်, ပဲရစ်စတော့အိတ်ချိန်း Betfair တွင်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အများဆုံးနှင့်ရှုပ်ထွေးဆုံးသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုသိရှိနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းနှင့်စနစ်တစ်ခုကိုပေးသည်. ၎င်းသည်ယူကေတွင်အကြီးဆုံးဘွတ်ကင်ပြုလုပ်သူဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အလေးစားဆုံးနှင့်လေးစားခံရဆုံးသောသူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်, စပိန်မှာလည်း.
Miscasasdeapuestas တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါရီ၏ဤစာမျက်နှာနှင့်အလွန်ရင်းနှီးကြသည်, နှင့်များစွာသော Betfair ကနေ. များစွာသောအပြုသဘောဆောင်သောရှုထောင့်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်ရန်ကြိုးစားခဲ့သောအားနည်းချက်များလည်းရှိသည်.
Betfair သည်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောအချက်သည်ပဲရစ်၏အားကစားကဏ္ section ကိုသင်ကြည့်လျှင်အလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည်, ယခင်စီးရီးများမှပေါ်လွင်ချက်များအားလုံးနှင့်လူတန်းစားဘောလုံးအားလုံး၏အရည်အသွေးအတူတူပင်ဖြစ်သည်.
၎င်း၏ထူးခြားထင်ရှားသောကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်သည်ပဲရစ်တန်ဖိုးစနစ်ဖြစ်သည် – Betfair Exchange – စျေးကွက်ထဲသို့ပထမဆုံး ၀ င်ရောက်ခြင်းအပြင်၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။.
ဤစနစ်သည်သင့်အားအိမ်သူအိမ်သားများနှင့်မဟုတ်ဘဲအခြားခရီးသည်များနှင့်ကစားရန်ခွင့်ပြုသည်, Betfair သည်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်, သင်မျက်နှာသာအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်။ စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါကတည်းက, ဒါပေမယ့်သူတို့ဖောက်သည်တွေရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်တွေအတွက်ကော်မရှင်သေးသေးလေးတစ်ခုပေးတယ်. ဒါပေမယ့်မင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ... စျေးကွက်အလားအလာကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပါပဲ.
မေး, မင်္ဂလာပါ, ဒါပေမယ့် Bet365 နဲ့ William Hill တို့ရဲ့တူညီတဲ့အမြင့်မှာမဟုတ်ပါဘူး. လောင်းကစားရုံကိုငါတို့ဆိုလိုတာက, ဝယ်ယူသူအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အတွက် Betfair သည်ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းထားသည်.
Betfair သည်အသုံးပြုသူများအတွက်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်, ၎င်းသည်ရိုးရာအလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးပဲရစ်ကိုစျေးဝယ်စင်တာတစ်ခုအနေနှင့်အလုပ်လုပ်သည်. ဒါဟာတစ် ဦး အတွက်ပဲရစ်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သည် “အိမ်” သို့မဟုတ်အခြားလူ့ကစားသမားဆန့်ကျင်. ဒီအဆုံးရန်, Paris Cruz သည်မျှဝေရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်.
ထက်ပိုပြီး 30 အားကစား
နောက်ဆုံး, အနည်းဆုံးမဟုတ်ပါ, သင်ထက်ပိုပြီးလောင်းနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည် 30 ဘောလုံးပွဲများမှအစအားကစားများ, တင်းနစ်သို့မဟုတ်ဘတ်စကက်ဘော, အရာပိုမိုလေ့ရေခဲဟော်ကီအဖြစ်လူသိများသည်, ဘေ့စ်ဘော, တင်းနစ်, ဘိလိယက်.
Betfair သည်အားကစားလောင်းခြင်းအပိုဆုများနှင့်အတူဖောက်သည်သစ်များကိုကြိုဆိုသည် 100 €, ပဲရစ်ကနေအခမဲ့ငါးသို့ခွဲခြားထားတယ် 20 တစ်ခုချင်းစီကို. အားကစားအလောင်းအစားဖောက်သည်အဖြစ်, သင်နှင့်ပတ်သက်။ ရွေးချယ်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည် 30 ကွဲပြားခြားနားသောအားကစား.
သငျသညျအရေးအပါဆုံးအားကစား၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လွှမ်းခြုံတွေ့လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သူတို့မှာနိုင်ငံရေးပြproblemsနာလည်းရှိတယ်, အခြားသူများအပါအဝငျ, ဘိုးလင်းလို, လှိုင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်. အစဉ်အလာဗြိတိသျှအားကစားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေမယ့်, လက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုသည်အလွန်ပြီးပြည့်စုံပြီးနိုင်ငံခြားနီးပါးမဟုတ်ပါ။ အားကစားကိုစတင်ခဲ့သည်.
သို့သော်ဘောလုံးသည် Betfair တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. အားကစားတွင်ကမ္ဘာ၏ထောင့်ပေါင်းစုံမှဂိမ်းများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်. Betfair သည်အင်္ဂလန်ဘောလုံးအားအဓိကအာရုံစိုက်သည်, ဤအချိန်ဘောလုံးအသင်းနှင့်အတူဤအချိန်ခြုံငုံအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်.
ငါတို့ကြိုက်တာကအားကစားအမျိုးအစားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးပဲရစ်ရဲ့မူလစရိုက်ပါ။ သင်ပဲရစ်စတိုင်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်: ကစားသမားလိဂ်မှာ, ဘောလုံးပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်ထောင့်အရေအတွက်သည် ပို၍ လုံခြုံသောအသင်းသို့မဟုတ်ကစားသမားဖြစ်သည်.
ဝဘ်ကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံးရှုထောင့်ရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါသော်လည်း, ကပုံရသည်ထက်သာ။ ကောင်း၏. သငျသညျနီးပါးတိုင်းလိဂ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, ပဲရစ်ဘောလုံးနှင့်လိင်ပြိုင်ပွဲ; ပြီးတော့ Betfair Soccer Paris ကိုဖလှယ်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းမတွေ့ဘူးဆိုတာကိုငါပြောနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျစပိန်လိဂ်အတွက်လောင်းချင်လျှင်, ဒါပေမယ့်လည်း Bundesliga ၌တည်၏, ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့်အီတလီစီးရီးများကိုမဆုတ်မနစ် ... Betfair ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်, သူလည်းပဲရစ်နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်သည်.
ကော်မရှင်ဘောလုံးစျေးကွက်, တင်းနစ်နှင့်ဘတ်စကက်ဘော Betfair သည်လောင်းကစားဈေးကွက်တွင်အပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးဖြစ်သည်. ၎င်းတွင် Turbo ခွဲတမ်းစနစ်လည်းရှိသည်, အခြားအိမ်တွင်းပေါ်တူဂီများထက်နိမ့်ကျပါကစပိန်အားကစားပြိုင်ပွဲများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်. သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်ကြီးမားသောအားကစားပွဲများအတွက်အရေးကြီးသောပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ပါက.
အိမ်သည်ပဲရစ်တွင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များစွာပါ ၀ င်သည်. ဂိမ်းသို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါရီကိုလွဲချော်မသွားစေရန်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်.
Betfair သည်အကြံပြုထားသောလောင်းကစားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Julio Maldonado ‘Maldini”, အားကစားသတင်းထောက်သည် Paris Euroleague ရှိ FC Barcelona နှင့် Arsenal ကိုတရားဝင်စပွန်ဆာပေးသည်. ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအများစု. သင် parameter သည်ကိုရွေးဖို့ပိုကောင်းတဲ့ရည်ညွှန်းရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. မျက်နှာပြင်မြင်ကွင်း. Betfair အရပျကိုကြာယှဉ်ပြိုင်မှုမရှိပါ.
Betfair Sports သည်ပါရီဘတ်စကတ်ဘောအားကစားနှင့်လိဂ်အမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်. သင်ရှာနိုင်သည်, ဥရောပလိဂ်နှင့် Euroleague အတွက် NBA ကနေ, ဒါပေမယ့်လည်းအာရှသို့မဟုတ်တောင်အမေရိကရှိယှဉ်ပြိုင်မှု. စျေးအသက်သာဆုံး option ကိုပြောင်းပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်မှာအိုလံပစ်အားကစားပွဲများကဲ့သို့ကြီးမားသောပွဲများတွင် Paris Betfair Exchange စနစ်သို့သွားရန်ဖြစ်သည်, ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့် Euroleague Euroleague.
သင်ဤအိမ်၏ site ကိုသွားလျှင်, သင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမျက်နှာပြင်တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါဝင်လိမ့်မည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် (အရာစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်), အသုံးပြုသူအမည်, စကားဝှက်နှင့်အီးမေးလ်. Betfair အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်, အချိန်သာလိုသည်.